विराटनगर विमानस्थल शनिबारदेखि सञ्‍चालन हुने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सानिमा बैंकको शाखा काठमाडौंको चपली र भक्तपुरको बालकोटमा
काठमाडौँ — सानिमा बैंकले काठमाडौंको चपली र भक्तपुरको बालकोटमा शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ ।
बैंकका अध्यक्ष बिनयकुमार श्रेष्ठ र बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष बसबहादुर महर्जनले संयूक्त रुपमा चपली शाखाको उद्घाटन गरे ।
त्यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर जिना बस्नेत र सो नगरपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष कमलनाथ आचार्यले संयूक्त रुपमा बालकोट शाखाको उद्घाटन गरे । बैंकको देशका सातै प्रदेशमा ११६ कार्यालय र ९७ वटा एटिएम. संचालनमा छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ १९:०४